Niyadjabka Xisbiga Bidixda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Niyadjabka Xisbiga Bidixda
La daabacay tisdag 2 november 2010 kl 09.57
"Waa in xisbigu lugihiisa ku istaagaa"-fikir ey ka dhawaajiyeen xubno ka tirsan xisbiga V.
Kadib heshiiskii ey dawladda iyo labada xisbi ee mucaaradka Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Doogu ka wada gaareen siyaasadda ciidammadaka dalkan kaga sugan Afgaanistaan ayey shuruudo ka soo yeerayaan xubin-goboleedyada xisbiga Bidixda ee Vänster in xisbigu noqdo mid ka madax bannaan isutagii Casaan-cagaarka kuna istaago lugihiisa.
Wargeeyska DN oo khadka telefoonka kula xiriiray badankood madax-goboleedyada xisbiga Bidixda ee Vänster ayey afar daloolow saddex ku caddeeyeen iney doonayaan in xisbigu lugihiisa ku istaago, islamarkaana uu siyaasad qeexan qaato.
Alexander Lowejko, gudoomiyaha xisbiga Bidixda ee gobolka Jönköpings:
- Waxaannu ka qeeyb qaadanay wada-shaqeeyn eynaan ku helin taageerada bulshada ee doorashadii dhacday. Sidaa daraadeed ayaa loo baahan yahay in aannu caddeeynno siyaasadda ey xisbiyadu ku kala duwan yihiin. Waxay aniga ila tahay inaannu ku guuleeysan kari lahayn taageero dheeriya haddii xisbigayagu ku taagnaado dhabadda cidda ugu cad-cad garabyada bidixda ee u ololeeya bulshada tabarta yar, islamarkaana, nidaamka hab nolol-wadaagga, sinnaanta iyo habka feminiismada ee xuquuqda haweenka oo aan ka dhigno su’aallo lagu daro ajandaha, sida ay ila tahay. Alexander Lowejko, gudoomiyaha xisbiga Bidixda ee gobolka Jönköpings.
Saaka arroornimadii ayuu hogaamiyaha xisbiga Bidixda Lars Ohly oo la hadlayay idaacadda la iska daawado ee SVT ku muujiyay niyad-jab in labada xisbi ee ey xulufada ahaayeen xisbiyada Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Dooggu ey ka tallaabsadeen heshiiskii ey horey u wada gaareen. Ohly ayaa sheegay in xulufada Casaan-cagaarku heshiis ku ahayeen guuldarradii kala soo gudboonaatay doorashada dabadeed afar su’aalood iney halkoodii ka sii wadaan: Su’aasha la xiriirta doorashada xilka af-hayeenka baarlamanka, iskuulka, soo ban-dhigga miisaaniyad u gaara garabkooda iyo ciidammada dalkan kaga sugan Afgaanistaan.
- Sidaa daraadeed ayuu niyad-jabku u jiraa, maadaama aan xitaa la dhoowrin heshiisyadii aannu wada gaarney wixii ka dambeeyay doorashada. Falkani maaha mid u wanaagsan is-aaminaadda, sida uu idaacadda SVT u sheegay Lars Ohly-hogaamiyaha xisbiga Bidixda (V).